किन खाली राखिन्छ उत्तर कोरियाको यो सुन्दर शहर ?
एजेन्सी । दक्षिण कोरियाबाट देखिने उत्तर कोरियाको सिमानामा एउटा सुन्दर शहर छ जहाँ विद्यालयदेखि लिएर अस्पताल पनि छन् । टाढाबाट हेर्दा त्यो शहरमा खुशीयाली छाएको जस्तो देखिन्छ । दुई माइलसम्म फैलिएको सो शहर हेर्ने जोकोही पनि पहिला त भ्रममा पर्न जान्छ किनकी त्यस सुन्दर देखिने शहरमा कोही मान्छे बस्दैनन् । भनिएको छ कि १९५३ मा बनाइएको यो शहर दक्षिण कोरियालाई मूर्ख बनाउने र लोभ्याउने उद्देश्यले बनाइएको थियो ।
नजिकबाट हेर्दा कोही मानिस नदेखिएपनि रातको समयमा भने यो शहर झिलिमिली हुने गरेको छ । त्यहाँका सम्पूर्ण भवनहरुमा बनाइएका झ्यालमा सिसा समेत हालिएको छैन तरपनि रातिको समयमा त्यहाँ अटोमेटिक लाइट सिस्टम हालिएकोले त्यसरी बत्ती बल्ने गरेको मानिसहरुको अनुमान छ । बिहान भएपछि ती बत्तीहरु आफैँ बन्द हुन्छन् जसले प्रमाणित गर्छ कि त्यो शहर केबल मानिसलाई भ्रममा पार्नका लागि मात्र बनाइएको हो । त्यहाँ काम गर्ने दुई-तीन जना कामदारबाहेक कहिल्यै कोही मानिस देखा नपरेको दक्षिण कोरियालीहरुले बताएका हुन् । प्राचीन समयमा पनि उक्त शहर हतियार संकलनका लागि रातारात निर्माण गरिएको बताइन्छ । त्यस समयमा युद्धका बेलामा त्यस शान्ति शहरलाई मैदानका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पनि बताइएको छ ।
त्यस शहरको ठीक विपरित दिशामा चाहिँ दक्षिण कोरिया रहेको छ जहाँ एउटा ३ सय २१ फिट अग्लो पोल रहेको छ । उक्त पोल दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाको विरोध गर्नका लागि बनाएको थियो जसको जवाफ स्वरुप केही दिनमै उसले पनि ५२५ फिटको त्यस्तै पोल बनाएको थियो ।
भाजपा काश्मिर प्रदेशको सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरियो
यस्तो आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदबाट अलग भयो अमेरिका
अवैधानिक रुपमा युएई बसेका कामदारले वैधानिकता पाउने
१० जनामै सीमित कोलम्बियाले जापानविरुद्ध गोल फर्कायो, मध्यान्तरसम्म बराबरी
नेपालमा धमिलो वर्षा, चीनमा अक्टोपस !
बिल गेट्सलाई पछि पार्दै जेफ बेजोस बने संसारकै धनी
अफगानिस्तानमा युद्धविरामले शान्तिको आशा बढाउँदै
ट्रम्पलाई भेटेलगत्तै गोप्यरुपमा चिन‍ पुगे किम
चिनियाँ वस्तुहरुमाथि थप कर लगाउने अमेरिकाको धम्की
पूर्वी सिरियामा ३८ लडाकू मारिए
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य आसाममा बाढीमा परी नौको मृत्यु
कोलम्बियामा इभान डुके नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
युद्धविरामको म्याद बढाउने सरकारी अपील तालीबानद्वारा अस्वीकार
ट्रम्प र पुटिनबीच जुलाईमा भेटवार्ता हुनसक्ने
र्इदको दिनमा अफगानिस्तानमा आत्मघाती विष्फोट, ४६ को मृत्यु
कम्बोडियाली राजकुमार सडक दुर्घटनामा घाइते